Gịnị bụ ihe ndị kasị Instagrammable Places Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị bụ ihe ndị kasị Instagrammable Places Na Europe
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị mma isi achọpụta a mba ọhụrụ - atụrụ ndụ gị ajụjụ, na-ekiri mma tụgharịa na site. Ha na-na na-na ụzọ kasị mma iru The kasị Instagrammable ebe na Europe!
Mgbe ọ na-abịa na-eme njem, gị ekwentị bụ n'ezie n'ebe nile ị na- – site na-ewere foto na vidiyo na-akpọ na ọtụtụ nzacha na captions. N'usoro ichikota njem gị, gị ezumike, bụ a oké ụzọ jide gị dị ebube na-echeta nke obodo, mba, na-eme ka ụzọ gị site na ebe. Bụghị naanị na ike ị na-azọpụta ndị a na-echeta na anya azụ na ha na-eme n'ọdịnihu, ma i nwere ike iji Instagram ịkọrọ oge a na ndị enyi gị.
ma, ebe ndị kasị Instagrammable ebe na Europe? Na-adịghị anwụ anwụ okwu nke Cady Heron si pụtara Girls, mgbe ọ na-abịa ọnụ ọgụgụ nke Instagrammable ohere, ókè-adịghị adị.
The kasị Instagrammable ebe na Europe: The Venice Simplon-Orient-Express: London - Venice
Anyị na-egbu nnụnụ abụọ na otu nkume ebe a. Nke a abụghị nanị otu n'ime kasị ama ụgbọ okporo ígwè ọrụ na ụwa ma bụkwa ihe kasị Instagrammable ebe na Europe. Ezie na e nwere a ole na ole dị iche iche ụzọ gasị ị pụrụ, ndị kasị ewu ewu bụ London na Venice njem. Ozugbo ị nwetara gị ụgbọ okporo Venice, na-enyemaka nke Save A Train, nhọrọ gị na-adịghị agwụ agwụ!
The Rialto Bridge bụ otu n'ime anọ àkwà mmiri gafere Venetian Grand Canal, nke pụtara na ọ bụ nnọọ ike foto na-enweghị ndị mmadụ na ya. Otu nhọrọ - dị ka na ihe niile ndị a ebe - bụ ịga nnọọ n'isi ụtụtụ.
M na obi abụọ ọ bụla doo obodo na-enweghị na-a foto nke Grand Canal. Ọ bụ ihe na-eme ka Venice, ọma, Venice! Onye nke kasị mma echiche nke na ọ bụ site n'elu Rialto Bridge.
The kasị Instagrammable ebe na Europe: The Bernina Express: Switzerland - Italy
Ejegharị n'etiti Chur na Switzerland na Tirano na Italy, na 122km njem na-ewe gị site na pụtara Swiss Alps. Zuru okè n'ihi na Instagram!
Ozugbo ị bịarutere na Switzerland, ebe a bụ ihe ndị kasị Instagrammable ebe:
IHE TOBLERONE obot
Ka nke a na ugwu anya maara? Ọ bụrụ na ị na mgbe eri a Toblerone mmanya, na bụ eleghị anya ihe mere! Ọ bụ ugwu nke ahụ gosipụtara na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ya mere ọ ji dị na ndepụta anyị nke Ebe kachasị Instagrammable na Europe.
Iji nweta otu shot n'okpuru, na-Gornergrat okporo ígwè site Zermatt n'ụzọ nile n'elu, mgbe na-eje ije ruo-ele anya mgbe (n'oge gara aga na hotel).
NDỤMỌDỤ: na Ahịa na Zermatt mgbe agba ọsọ nke Toblerone Ogwe maka a kpọmkwem shot! Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ a shot na adịghị na-achọ ime gị Ohere-eme ka ahụ n'aka na ị zụta ya tupu ị ga-esi Zermatt.
Ọ bụrụ na ị na-ebe a maka njem (i.e.. paragliding) mgbe o doro anya na ị ga na-snapping ụfọdụ The Epic Instagram gbaa. Echela ka ebili gị ọbara mgbali? Ị nwere ike nweta a jụụ shot site n'elu ike Kulm. Ị ga-enweta ihe ịrịba anya n'elu obodo nke Interlaken na Swiss Alps.
The kasị Instagrammable ebe na Europe: The Brocken Railway. Harz Mountain iche, Germany
Na nke a karịsịa ụzọ, ị ga-ịrị 1,142m-elu Brocken, kasị elu ọnụ ọgụgụ kasị elu nke dị n'ebe ugwu Germany, ụtọ panoramic echiche nke na gburugburu ala. ma, ị na-adịghị ka naanị dị ka rịa ugwu ileta Harz Mountains. N'ezie, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-amasị ụmụaka ji egwuri egwu obodo na fairytale castles, UNESCO World Heritage Sites, ebe e wusiri ike, na ebe obibi ndị mọnk site na Middle age, ma obu ihu Anụ ọhịa na ebe obibi ha. Zuru okè n'ihi na gị Instagram oriri!
Leipzig ka Wernigerode Brocken Ụgbọ oloko
Hanover na Wernigerode Brocken Ụgbọ oloko
Munich na Wernigerode Brocken Ụgbọ oloko
Berlin na Wernigerode Brocken Ụgbọ oloko
Gị Collegiate Church, Castle, na Old Town nke Quedlinburg
Na Nchikota Grunderzeit na Art nouveau Villas, Old Town of Quedlinburg-eme ka ọ onye nke kasị Instagrammable ebe na Europe. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-elu àgwà nke osisi-gosikwa ụlọ na kwenyere UNESCO na-ekwusa Quedlinburg ahụkebe atụ nke a ochie European obodo.
Leipzig ka Quedlinburg Ụgbọ oloko
Hanover na Quedlinburg Ụgbọ oloko
Munich na Quedlinburg Ụgbọ oloko
Berlin na Quedlinburg Ụgbọ oloko
Ejegharị ejegharị, tinyere ndị West Highland Line, na Jacobite Steam Train na-eleghị anya kasị mma mara maka ọrụ ọ na-arụ na Harry Potter movies - dị ka Hogwarts Express. The ụgbọ okporo ígwè na-agba ndị 84 mile gbatia kewara Fort William si Mallaig na West Highland Railway Line. Ọ na-na-kpọrọ otu nke kasị ukwuu okporo ígwè njem na ụwa, na n'ụzọ ziri ezi otú!
Nwere a lee anya na ụfọdụ nke eserese gị nwere ike na-snapping onwe gị!
The kasị instagrammable ebe na Europe: The Yellow Train, France
Kwuo 'Ee’ a njem! N'ihi na ihe karịrị otu narị afọ, a mita-nlele odo ụgbọ okporo ígwè e asọfe ụzọ ya site na French Pyrenees si Villefranche-de-Conflent ka Latour-de-Carol. Ihe ọ kọrọ na anya - na ọ bụ naanị 63km na banyere awa atọ ogologo - ya karịa eme ka elu na-kpam kpam Instagrammable echiche. The ịrịba ama ugwu nke Parc Naturel Regional des Pyrenees Catalanes ịbụ otu n'ime ha!
Ọ na-akwụsị na France kasị elu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, Bolquere-Eyne. Nke na-anọdụ na 1592m elu oké osimiri, na obe na Pont Gisclard, a ụgbọ okporo ígwè nkwusioru akwa.
Lyon na Toulouse Ụgbọ oloko
Marseilles na Toulouse Ụgbọ oloko
Bordeaux na Toulouse Ụgbọ oloko
Ana na ekwentị ma melite gị Instagram ngwa. Ọ bụ oge ka akwụkwọ a tiketi na-enyemaka nke Save ATrain ma na-snapping!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Gịnị Ka Ị Na Europe Na February & Travel Atụmatụ